ABONA BANTU BAZIZITYEBI BASEMELIKA ABANGAMA-50 BALINGANA NABONA BANGAMAHLWEMPU ABAZIZIGIDI EZILI-165 - OKUNYE
Abona bantu bazizityebi baseMelika abangama-50 balingana nabona bangamahlwempu abazizigidi ezili-165
Abantu abangama-50 abazizityebi baseMelika ngoku babambe phantse ubutyebi obuninzi njengesiqingatha se-US, njengoko i-Covid-19 iguqula uqoqosho ngeendlela ezivuze ngokungenamkhethe iklasi encinci yeebhiliyoni.
NguBen Steverman kunye no-Alexandre Tanzi | Bloomberg
Idatha entsha evela kwi-US Federal Reserve, ukujonga ngokubanzi ubutyebi base-US kwisiqingatha sokuqala sika-2020, kubonisa ukungafani okuphawulekayo ngokobuhlanga, ubudala kunye neklasi. Ngelixa i-1% ephezulu yabantu baseMelika inexabiso elidityanisiweyo le-34.2 yeetriliyoni zeedola, abona bahluphekayo bangama-50% - malunga ne-165 yezigidi zabantu - babambe nje i-2.08 yeetriliyoni zeedola, okanye i-1.9% yabo bonke ubutyebi bekhaya.
Abona bantu bazizityebi abangama-50 kweli lizwe, okwangoku, baxabisa phantse i-2 yeebhiliyoni zeedola, ngokutsho kweBloomberg Billionaires Index, inyuse i-339 yeebhiliyoni zeedola ukusuka ekuqaleni kuka-2020.
I-Covid-19 yongeze ukungalingani e-US, kunye nokulahleka kwemisebenzi kwehla kakhulu kubasebenzi benkonzo yemivuzo ephantsi kwaye intsholongwane isosulela ngokungafaniyo kwaye ibulala abantu bemibala. Ngeli xesha, uninzi lweengcali ezikumgangatho ophakathi zisebenza zisuka ekhaya, zibukele iiakhawunti zabo zomhlalaphantsi zinyuka ngexabiso emva kokuba uNondyebo wase-US kunye neFed iphose isivuseleli kuqoqosho nakwiimarike.
Esinye isizathu esibalulekileyo sokungafani kobutyebi kukuba uninzi lwabantu baseMelika abaxhamli ngokunyuka kwamaxabiso esitokhwe. I-90% ye-exposure ye-stock market iye yehla malunga neminyaka engamashumi amabini. Ukusukela ekunyukeni kwe-21.4% ngo-2002, abantu baseMelika abakumgangatho ophakathi babone ipesenti ye-10 yehla kwinzala yabo yokulingana kwiinkampani. Ipateni efanayo ibonakala phakathi kwesiqingatha esisezantsi.
Abona bazizityebi be-1% baphethe ngaphezu kwe-50% ye-equity kwiinkampani kunye nakwizabelo zengxowa-mali, i-Fed data show. I-9% elandelayo yabona bazizityebi banezikhundla ezingaphezu kwesithathu kwi-equity positions - oku kuthetha ukuba i-10% ephezulu yaseMelika ibamba ngaphezu kwe-88% yezabelo.
Idatha ye-Fed ibonisa kwakhona ukuba isizukulwana seMillennial, esizalwa phakathi kwe-1981 kunye ne-1996, silawula nje i-4.6% yobutyebi base-US nangona baninzi kakhulu emsebenzini kunye namalungu e-72 yezigidi. Kwaye isabelo sepayi esibanjwe ngabaMnyama baseMelika silingana nobukhulu beminyaka engama-30 edlulileyo.
Njengelizwe ngokubanzi, ubutyebi bolutsha baseMerika bugxininiswe kwizandla nje ezimbalwa. Iminyaka eyi-Millennials emithathu - i-Facebook Inc. i-co-founders uMark Zuckerberg kunye noDustin Moskovitz, kunye ne-Walmart Inc. indlalifa uLukas Walton - buqu ukulawula enye kwi-$ 40 ebanjwe yi-general cohort.
Lo bhubhani uqhubeka usanda iyantlukwano kubutyebi kunye nokuhamba kwezoqoqosho, uSihlalo weFed uJerome Powell uthe ngoLwesibini, elumkisa ngelithi ukuchacha kwelizwe kuya kuba buthathaka ngaphandle koncedo lukarhulumente. Ithuba elide lenkqubela phambili ecothayo ngokungeyomfuneko lingaqhubeleka ukwandisa iyantlukwano ekhoyo kuqoqosho lwethu.
Kwiiyure ezimbalwa emva kwentetho yakhe, uMongameli uDonald Trump uxelele oothethwano ukuba bayeke iingxoxo kunye ne-Congressional Democrats kwenye iphakheji yoncedo kude kube semva konyulo lukaNovemba.
Abo banobutyebi babo bubotshelelwe kwiinkampani zobugcisa - eziye zafumana inzuzo ngokutshintsha komsebenzi, ukuthenga, ukuzonwabisa kunye nokunxibelelana kwi-Intanethi - bebephakathi kwabaxhamli abakhulu kuqoqosho lwe-Covid-19. Ukhokela indlela ngumsunguli we-Amazon.com uJeff Bezos. Ithamsanqa lakhe, elona likhulu kwihlabathi, liye latsiba ngeepesenti ezingama-64 ngo-2020 laya kutsho kwi-188.5 yeebhiliyoni zeedola. NgoLwesithathu kuphela, uBezos wongeze ngaphezulu kwe-5 yeebhiliyoni zeedola kwixabiso lakhe.
Abantu abaMhlophe baseMelika babamba i-83.9% yobutyebi besizwe, xa kuthelekiswa ne-4.1% kumakhaya aMnyama, idatha ibonisa. Ngelixa isabelo sabaMhlophe baseMelika bebonke siye sehla ngandlel’ ithile njengoko isizwe sisiya sinokwahluka ngakumbi, abantu abaMnyama babambe ipesenti efanayo neyango-1990.
Kubantu baseMelika abazizityebi abangama-25, mnye kuphela ongeyena uMhlophe - u-Eric Yuan, igosa elilawulayo leZoom Video Communications Inc., obutyebi bakhe bunyuke phantse ngokuphindwe kasixhenxe kulo nyaka ukuya kwi-24.2 yeebhiliyoni zeedola.
I-Baby Boomers ibambe ubuninzi bobutyebi base-US, kunye ne-$ 59.6 yezigidigidi, kabini i-Generation X ye-28.5 yeetriliyoni zeedola kunye namaxesha angaphezu kwe-10 ye-Millennials 'i-5.2 yezigidigidi zeedola.
Idatha ye-Fed ibonisa ukuba u-Gen X, abo bazalwa phakathi kwe-1965 kunye ne-1980, benze inkqubela phambili yokwakha ubutyebi kwiminyaka yakutshanje, bephinda kabini ixabiso labo elihlangeneyo ukususela phakathi ku-2016.
Ubutyebi besizukulwana saseU.S
Akuqhelekanga ukuba amaqela aselula ahlwempuzeke kakhulu kunabadala bawo. Nangona kunjalo, iiMillennials zihlala ngasemva apho izizukulwana zangaphambili zazikwiminyaka efanayo. Kwi-1989, xa i-Boomer ephakathi yayineminyaka engama-34, isizukulwana sasilawula ngaphezu kwe-21% yobutyebi base-US. Ukungqamanisa oko, iMillennials, eneminyaka engama-32 ngoku, kuya kufuneka iphinde iphindwe kane kwisabelo sabo sobutyebi kule minyaka imbalwa izayo.
UBiden uthi 'unethemba elikhulu' malunga nesindululo sohlahlo lwabiwo-mali
Kutheni abasebenzi beyeka? Ubek' ityala umphathi olihilihi!
Ukupheliswa koncedo olungaphangeliyo akubangeli ukuthontelana kwabasebenzi
Indawo yaseBay, umsebenzi waseCalifornia uzuza kancinci kakhulu
Amabango okungasebenzi eCalifornia anyukela kwinqanaba eliphezulu kwiinyanga ezintandathu
Abasebenzi abasebatsha nabarhola imivuzo ephantsi baye bafumana intlantsi yethemba kule minyaka yakutsha nje njengoko imivuzo ephakathi iqale ukunyuka ngokukhawuleza kunokwenyuka kwamaxabiso. Kodwa kulo nyaka ukwanda kwentswela-ngqesho kusongela ukudodobalisa le nkqubela phambili, ibuyisela i-US kwindlela yamashumi ambalwa eminyaka adlulileyo, xa ubutyebi buye buphuma ngokuthe chu ukuya phezulu.
Ukusasazwa kobutyebi eU.S
I-Fed iqikelela i-10% ephezulu yamakhaya ase-US abambe i-69% yobutyebi belizwe, okanye i-77.3 yezigidigidi zeedola, ukusuka kwi-60.9% isabelo ekupheleni kwe-1980s. Abona bantu bazizityebi baseMelika phantse banoxanduva lwaloo nzuzo. I-1% ephezulu ibambe i-30.5% yobutyebi base-US ngoJuni, ukusuka kwi-23.7% ngasekupheleni kwe-1989. Isabelo sesiqingatha esisezantsi, okwangoku, siwile kwi-3.6% ukuya kwi-1.9%.
— Ngoncedo lukaTom Maloney